जिग्रीलाई देशको चिन्ता - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
आजको सिनेमा ‘देउता’
बाहिरियो शेरबहादुरका कथावस्तु
डिठ्ठा साबले अर्को वर्ष ‘चङगा’ उडाउने
अनुप्रस्थको नयाँ गीत ‘अद्वितिय’को भिडियो सार्वजनिक
आजको सिनेमा ‘मेरी आमा’
जिग्रीलाई देशको चिन्ता
१५ कार्तिक २०७४, बुधबार १८:२०
काठमाण्डौ   कार्तिक १४ ✎
कुमार कट्टेल अर्थात् जिग्री र भद्रगोलका टिम यति बेला निश्चल बस्नेत लाई लिएर नाम तय नभएको सिनेमा निर्माणमा जुटेका छन् । बेलाबखतमा सामाजिक काममा सक्रिय हुने जीग्री र पाँडे मिलेर सप्तरीको गम्हरीयामा दृष्टिविहिनको लागि घर समेत निर्माण गरिदिएका छन् । आफ्ना दाजुभाउजु धुर्मुस सुन्तलीको विभिन्न वस्ती निर्माणमा खटिएका जिग्री उर्फ कुमार केही दिन अगाडि आउदै गरेको चुनावको विषयलाई लिएर व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा जनतालाई कटाक्ष प्रहार गरे । अघिपछि देश विकास नगरेको भन्दै बुढा नेतालाई गाली गर्ने हामी नेपाली चुनावमा भने तिनै निकम्मा भनेका नेता र उनका पार्टीलाई भोट हाल्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्टाटस लेखे । उनको भनाई थियो अब नयाँ जोश बोकका नयाँ नेता आउनुपर्छ । किन पाका र वर्षौ राजनीति गरेका नेता माथि कडा प्रहार गर्दै स्टाटस लेखे त ? हामीले आजको गफगाफमा उनै जिग्रीलाई केही प्रश्न सोधेका छौँ ।
तपाईले नेतालाई व्यङ्ग्य सहितको स्टाटस किन लेख्नु भएको हो ?
अब चुनाव हुदैँ छ । चुनावले भनेको देशको प्रतिनिधी छान्ने हो । एउटा नेतृत्व छान्ने हो । यो चुनावले पाँच वर्ष पछि नेपाल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्नेछ । यो चुनावमा हामीले अगाडिको जस्तै गर्यौ भने हल्ला गर्न , देश दुर्घटनामा गएको हेर्न बाहेक केही हुदैन । हामीले नेताले देश बिगारे भन्छौ तर चुनावमा हामी डेट सकिसकेका नेतालाई जिताउँछौ । यसमा हामी जनताको नै गल्ती छ । हामीले देश बनाउने हो भने राम्रो सोच भएका नेतालाई , राजनितीलाई गरि खाने भाडो नबनाउने सोच भएका युवा नेतालाई र राजनितीलाई समाजसेवाको रुपमा लिने युवाहरु चुनावमा जिताउनु पर्यो । जोस जाँगर भएकोलाई अवसर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो देशमा लगभग ८० प्रतिशत युवाहरु छन् । त्यसले गर्दा ७० वर्ष कटेका बूढाहरु नेतृत्व कसरी गर्छन ? मेरो चिन्ता त्यता तिर भएर एउटा स्टाटस लेखेको हो ।
त्यसो भए को राम्रो छ त ?
मैले सिधै यो पार्टीको यो राम्रो छ यो नराम्रो भनेर त कहिल्यै भन्दिनँ । जनताले यस बारेमा मूल्याङ्न गर्नुभएको छ । मैले काठमाडौँको चिजलाई हेर्न हो भने रविन्द्र मिश्र । उहाँले लामो समय राम्रो गर्नुभएको व्यक्ति हो । हामीले पनि गरेको समाज सेवाको केही अंश उहाँहरुसंग जोडिन गएको छ । लामो समय आफ्नो पेसालाई मर्यादित पारामा निभाएर राजनीतिमा जानु भएको छ । उहाँले भ्रष्टचार या राष्ट्रियलाई बिगार्न तिर नलागेर समाजमा धेरैको आईडल बनिसक्नुभएको छ । राम्रो मान्छेलाई जिताउनु पर्छ । यसो भन्दै गर्दा पनि उहाँहरुलाई जनताले जिताउनु हुन्न भने हामीलाई घाटा हो जस्तो लाग्छ । उहाँ बाहेक सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेलामा मदनकृष्ण श्रेष्ठ , हरिवंश आचार्य , राजेश हमाल , सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई देश हाक्न दिनु पर्छ भनेर चर्चा चलेको देखिन्छ । तर भोट गर्दा चाही हामी फेरि उही बुढापाका नेतालाई नै दिन्छौँ ।
त्यसो भए तपाईको दाई ,सिताराम कटेल धुमुर्स राजनितीमा आउने सम्भावना कतिको छ ?
ऋब दाई राजनितीमा आउँनुहुन्छ या आउनुहुन्न उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । राम्रो सोच भएका मान्छेहरु समाजमा परिवर्तन ल्याउन चाहानेहरु राजनितीमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । राजनिती भनेको समाजविकास निमार्ण हो भन्ने बुझ्न जरुरत छ यहाँ । दाईले आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रियका लागि जति गरि रहनुभएको छ । उहाँले देशको विकासको लागि यति धेरै मेहेनत गरिदिनुभएको छ । मान्छेले धुमुर्स जस्तो मान्छे राजनितीमा आउनुपर्छ भन्छन् । तर राजनितीमा आउँदा भोट आउँदैन भने किन आउने ? त्यहीकारण परिवर्तन भनेको जनताबाट हुन जरुरत छ ।
देशको बारेमा तपाईलाई चिन्तन् के कारणले जागेर आयो ?
चिन्तन मलाई म आफू पनि यो देशको जिम्मेवार युवा, नागरिक र यो देशलाई माया गर्न यो देशलाई गर्भका साथ भन्ने नेपाली हुँ । म यो देशमा बसेर मेरो पेसालाई मर्याधित पारामा गरि खाने पेसा बनाएर अगाडी बढ्न चाहान्छु । मैले कसैको बिगारेको छैन् र केही बिगार्नु पर्छ भन्ने सोच छैन । म विदेश गएर केही वर्ष उतै सङ्घर्ष गरेर फर्केको युवा पनि हुँ । अहिले कार्यक्रमको क्रममा म विदेश पनि जान्छु । त्यहाँ हुने नेपालीहरु सग कुराकानी पनि हुन्छ । लगभग नेपाल घुम्न लागेँ । यो सबै गर्दा मैले नेपाली माथि तागत ,ईच्छा, शक्ति छ । तर, हामीमा एउटा सोच र योजनाको कमी छ । देश बनाउन समय लाग्दैन । त्यही कारण पनि हामीले यतिबेला सोच्ने बेला भएको छ । यो चिन्ताले पनि मलाई चिन्तन गर्न बाध्य बनायो ।
त्यसो भए तपाई राजनितीमा खुलेर नै आए हुन्न र ?
कलाकार हुनको नाताले मैले सक्दो त गरिरहेको नै हुन्छु । मैले फेसबुकको स्टेटसबाट मैले धेरै युवालाई मोटिभेट गरेको छु । मैले सबैको नसके पनि युवाको सोच परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छु । समाज सेवामा मैले सक्दो मद्दत गरेकै छु । गुन्डागिरी र दादागिरीे खाल्को राजनितिक अभियानमा म छैन । म सकारात्मक सोचको साथ अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने युवा हो । मेरो कलाकारिता संग सगै मलाई समाजसेवामा धेरै चिज गर्नु छ । त्यसकारण तत्काल राजनीति गर्ने भन्ने सोच छैन । तर राजनिती भनेको निस्वार्थ समाज सेवा हो भन्ने देखाउन राम्रो समूह पाईयो भने जान पनि सकिन्छ ।
आउदै छ माघ १९ : ‘शेर बहादुर’ को के हुन्छ ?
‘पूर्व पश्चि रेल’ बन्यो दुई करोड पटक हेरिने गीत
अन्योलमा परे माग्ने बुढा
अमेरिकामा ‘नेपाली कलाकार समाज केन्टकी च्याप्टर’ शुरु
‘भद्रगोल’को रेकर्ड– बन्यो छोटो समयमा धेरै हेरिने टेलिश्रृङला
तुलसी घिमिरेको कथा,पटकथा, सम्वाद, सम्पादन र निर्देशन रहेको सिनेमा ‘देउता’ आज भन्दा २७ वर्ष अगाडिको सिनेमा हो । २०४८…
मनोज गजुरेलसंग सम्बन्ध विच्छेद पछि मिनाको यस्तो व्यवसाय